भरतपुर अस्पतालमा फरेन्सिक डाक्टर अभाव « Nepal Health News
भरतपुर अस्पतालमा फरेन्सिक डाक्टर अभाव
२०७६, १२ आश्विन आईतवार १०:३४ मा प्रकाशित
भरतपुर अस्पतालमा फरेन्सिक डाक्टर नहुँदा जटिल प्रकारको पोस्टमार्टममा समस्या परेको छ । मेडिकल अफिसरको भरमा पोस्टमार्टम हुँदै आएको छ । दैनिक औसत पाँचवटासम्म पोस्टमार्टम हुने गरेकोमा अस्पतालमा केही वर्षदेखि चितवन मेडिकल कलेजका प्रो.डा. तेजप्रसाद चटौतले भरतपुर अस्पतालमा गई दैनिकजसो शव पोस्टमार्टम गर्ने गरेका थिए । तर, अस्पतालले पोस्टमार्टम गरेबापतको सेवासुविधा नदिएपछि विगत तीन महिनादेखि उनी आएका छैनन् । पोस्टमार्टममा सहभागी हुने कर्मचारी देवानन्द राईले पनि तीन महिनादेखि विनातलब काम गरिरहेका छन् ।आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित पोस्टमार्टम भरतपुर अस्पतालमा हुन छाडेको छ । मेडिकल अफिसरले सामान्य प्रकृतिका मात्रै पोस्टमार्टम गर्ने गरेका छन् । कुटपिटबाट मृत्यु, हत्या, शंकास्पद मृत्युजस्ता घटनाका शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पताल लैजाने गरिएको छ ।
६ सय शय्या रहेको भरतपुर अस्पतालमा फरेन्सिक डाक्टरको दरबन्दी हुँदा पनि पोस्टमार्टम परीक्षणका लागि विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् । फरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा अहिले निजी मेडिकल कलेजबाट विशेषज्ञ डाक्टर नियुक्ति गरी भरतपुर अस्पतालमा केही समय शव पोस्टमार्टम गरिँदै आएको थियो ।
सरकारी डाक्टर नहुँदा निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टरले शव परीक्षणको काम गरिरहेकोमा सेवासुविधा नपाएपछि उनले समेत काम छाडिदिएका छन् । समयमै पोस्टमार्टम नभएको भनी गुनासो आउने गरेको भरतपुर अस्पतालका मेसु डा. श्रीराम तिवारीले बताए । नयाँपत्रिकाबाट